Airbus hanova ny fipetrahany eropeana amin'ny aerostrukture
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » France Travel News » Airbus hanova ny fipetrahany eropeana amin'ny aerostrukture
Airbus dia manome antsipiriany bebe kokoa momba ny fanombanana ataon'ny orinasa momba ny fananganana indostrialy any Eropa
Airbus dia mikasa ny hamorona orinasa fiaramanidina vaovao any Frantsa sy Alemana
Resaka mitohy momba ny fananganana indostrialy any Espana
Airbus dia nanamafy ny fikasany hanangana rojom-pifandraisana aerostrukture matanjaka kokoa manerana ny rafitra indostrialy
Airbus dia nanome antsipiriany bebe kokoa ho an'ireo mpiara-miasa aminy mandritra ny fivorian'ny fivorian'ny European Works Council (SE-WC) momba ny fanombanana ataon'ny orinasa momba ny fananganana indostrialy any Eropa, indrindra momba ny hetsika aerostrukture any Frantsa sy Alemana.
Airbus dia nanamafy ny fikasany hanangana rojom-bidin'ny fivondronan'ny fiaramanidina mahery vaika manerana ny rafitry ny indostria ho an'ny mpiara-miasa aminy ary mihevitra ny fivondronan'ny aerostrukture ho fototry ny orinasany. Airbus dia nanolotra ny drafitra hamoronana orinasa fivondronan'ny aerostrukture roa mifangaro ao anatin'ny rafitra indostrialy mba hanamafisana ny fitantanana ny onjam-bola ary hanomanana ny orinasa amin'ny ho avy maharitra sy maharitra.
Tafiditra ao anatin'ireto drafitra ireto, ary rehefa vita soa aman-tsara ny fizotran'ny fiaraha-monina, ny orinasa vaovao any Frantsa dia hampivondrona ireo hetsika tantanina ao anatin'ny Airbus any Saint-Nazaire sy Nantes miaraka amin'ireo an'ny STELIA Aerospace manerantany. Orinasa iray hafa any Alemana no hitondra ny asan'ny Stade and Structure Assembly of Hamburg miaraka amin'ireo an'ny Premium AEROTEC any Nordenham, Bremen ary ny sasany ao Augsburg, raha mandanjalanja ny hetsika mankany amin'ny tapany ambony amin'ny rojom-bidy ary manadihady ny fandraisany anjara amin'ny famokarana antsipiriany. faritra.
Ireo orinasan-tseranana aerostruktura roa vaovao ireo, izay samy tompon'ny Airbus, dia tsy ho mpamatsy an'i Airbus intsony fa ho tafiditra ao anatin'ny perimeter Airbus, manamora ny fitantanana sy ny interface amin'ny fananganana indostrialy vaovao. Ny satan'izy ireo manokana dia ahafahan'izy ireo mifantoka amin'ny sehatry ny indostria ary ho marefo sy mailaka kokoa, mitombo ny fifaninanana, fanavaozana ary kalitao ho tombontsoan'ny programa Airbus anio sy rahampitso.
Airbus koa dia mikasa ny hamorona mpilalao manerantany vaovao amin'ny sehatry ny antsipiriany momba ny asa, miantsona any Alemana. Teraka tamin'ny Premium AEROTEC androany, ity orinasam-baovao ity, miaraka amin'ny ambaratonga sy ny haitao mandroso, dia hanan-kery hanararaotra ny tombam-bidin'ny fitomboana maharitra miaraka amin'i Airbus ary koa ny mpanjifa ivelany, amin'ny sehatra sivily sy miaramila.
Any Espana, Airbus dia manohy miasa amin'ny vahaolana miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy ara-tsosialy hanatsarana ny fananganana indostrialy sy aerostrukture ankehitriny ao amin'ny faritra Cadiz mba hiantohana ny fahavelomany, ny fahaizany mivaingana ary ny fifaninanana ho an'ny ho avy.